सिड्नी । सकारात्मक जीवन, राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमान जागरणका लागि सिड्नीमा एक भव्य उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम हुने भएको छ ।
जहाँ नेपालका पूर्व मन्त्री परिषदका अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मि, विश्व शान्ति परिषदका शान्ति दुत तथा उत्प्रेरक वक्त्ता आचार्य राजन शर्मा (भीमसेन सापकोटा), संचारकर्मि तथा प्रखर वक्ता प्रेम बानीया, नागरिक समुहका प्रमुख तथा प्रेरक वक्ता निगम हुंमागांईं लगायतका वक्ताहरूको जोडदार प्रस्तुती रहने छ ।
कार्यक्रम विश्व शान्ति तथा अध्यात्म विज्ञान समाजको मुख्य आयोजना र असनेपालन्युजको प्रस्तुतिमा १७ फेब्रअरि २०१८ आईतबार ११ः३० बजे देखि हर्सभिल स्थित सिभिक थिएटरमा हुन लागेको हो ।
कार्यक्रममा राजदुतावास, महावाणिज्य दुतावास ,गैर आवसीय नेपाली संघ अस्ट्रेलिया र विभिन्न संघ संस्थाको सहभागिता रहने जनाइएको छ । नेपाली समुदायले नेपाल सहयोग का लागि के के गर्न सक्छन् न्यायाधिश देखि प्रधानमन्त्री सम्मको यात्रामा नेपालका के के रहस्यहरू भेटिए ? एक स्वाभिमानि पत्रकार किन विदेश लाग्नु र्पयो ? नेपाललाई नयां युगको सम्पन्न राष्ट्र बनाउंन अब विदेशका नेपालीले के गर्न सक्छन् ? एक सुखी, तनाव रहित र सकारात्मक नागरिक बनेर देशलाई कसरी सघाउंन सकिन्छ ? लगायतका बिषयमा प्रेरक अभिव्यक्ति र वहस हुने जनाईएको छ ।
कार्यत्रममा सहभागिहुन सहयाेग स्वरूप १० डलर प्रवेश शुल्क रहेकाे विश्व शान्ति तथा अध्यात्म विज्ञान समाजका महासचिव बिदुर सापकाेटाले नेपाली पत्रलाइ बताए ।
Motivational Talk Sydney